Test Electrical - Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd
Ukususela lezithuba ezabelwe iziko ngo-1996, PCB Wonderful sele ugxininisa umgangatho ophezulu iimveliso zayo. Ngenxa yoko, ngasinye kuzo ibhodi kufuneka ivavanywe phambi kokuba idlala indima ngokwenene kwiiprojekthi abaxumi 'nje ukuze kuqinisekwe ukuphunyezwa kakuhle lusebenze kunye nemisebenzi, nto leyo eye ikhonkco ebalulekileyo kwinkqubo yethu PCB kungamampunge.
Njengoko ukuphuculwa elektroniki mihla kunye nokunyusa yobunzima lweemveliso elektroniki, imihla xa uhlolo olubonakalayo kuphela lathembela baye ukususela uhlolo olubonakalayo isebenza kuphela ngokwentelekiso kakuhle PCBs kabini-ezikroziswayo PCBs multi-maleko phambi lamination. Namhlanje, kunye nophuhliso vias ezifana vias abaziimfama / wangcwatywa, kunzima ukuba uhlolo olubonakalayo ukufezekisa kude.
Esililini uvavanyo lezikhonkwane, naye kuthiwa iqokobhe ukuzola okanye ngegridi jikelele, luzalisekiswa ngenxa ezininzi ngezinto zovavanyo enamandla nje igama layo ichazwe.
• Flying Ihlole Testing
Flying uvavanyo probe ixhomekeke ihamba ixhokonxa ukuvavanya intsebenzo yombane net nganye kwi ibhodi yesekethe ebalelelwe lilanga.
Noba umandlalo zovavanyo izikhonkwane okanye eziphaphazelayo uvavanyo uphenyo, izinto uvavanyo ikakhulu kukugubungela ukusuka ivula, iibhulukhwe ezimfutshane, capacitance ukuya uxhathiso ejikeleza kwi kwibhodi ngalinye kanye. Ukongeza, ezinye iingxelo ingashwankathelwa ngokusebenzisa iziphumo zovavanyo kuquka icandelo umnqamlezo, solderability, Ixolo amandla njl ukwenzela ukuba intsebenzo entle kwaye yonke imisebenzi iibhodi ezingenanto zinokuphunyezwa ngokupheleleyo iiprojekthi zakho zempilo.